‘आयंका’माथि नै भर ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
‘आयंका’माथि नै भर ?
फिल्मी फण्डा । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी अभिनित फिल्म हो ‘प्रेमदिवस’ । फिल्मलाई लिएर यो जोडी उत्साहित छन् । रजतपटमा खासै नोटिस हुन नसकेका आयुष्मानको प्रियंकासँग प्रेममा रहेपछि र इङ्गेजमेन्ट पछि डिमाण्ड बढेको छ । ‘आयंका’ जोडीलाई दर्शकले रुचाएका छन् ।
फिल्मलाई प्रियंकाले अझ विशेष रूपमा लिएकी छिन् । उनले फिल्मका गीत, ट्रेलरदेखि लिएर समर्थकका टिप्पणी आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर थाक्दिनन् । योगेश घिमिरे निर्देशित यो फिल्म सफल भएमा आयंका जोडीको डिमाण्ड र बजारभाउ निकै बढ्नेवाला छ । त्यसकारण प्रियंका मात्र होइन, आयुष्मानले पनि प्रचार–प्रसारमा खटिइरहेका छन् । तर, फिल्म युनिटले प्रचार–प्रसारमा उति साह्रो जाँगर चलाएका छैनन् । फिल्म प्रदर्शन अघि ठुलै हल्ला–खल्ला गर्ने रजतपटको शैलीमा ‘प्रेमदिवस’ मौन छ । उनीहरु ‘आयंका’ जोडीमाथि नै भर परेका हुन् ?
प्रियंकाले त छक्का पन्जा, नाइँ नभन्नु लका सिरिजलगायत केही फिल्म हिट दिएकी छिन् । कुनै समय रजतपटको नम्बर वान नायिकाको पहिचान पनि बनाइन् । तर, चपली हाइट–२ बाट डेब्यु गरेका आयुष्मानका अहिलेसम्मका फिल्म हिट भएका छैनन् । उनी ‘चपली हाइट–२’ पछि ‘कथा काठमाडौं’, ‘चंगा चेट’लगायतमा मुख्य भूमिकामा देखिए  पनि सफलताको स्वाद चाख्न पाएनन् ।
त्यसकारण यो फिट जोडीलाई ‘प्रेमदिवस’ हिट हुनु एकदमै जरुरी छ । फिल्मको प्रचार–प्रसारमा खटिएका यो जोडीको मिहेनत कत्तिको फलिफाप होला ? त्यो भने फिल्म प्रदर्शन पछि नै थाहा हुनेछ । प्रतिक्षा गरौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : चुनावी एजेण्डा पुरा गर्ने रविन्द्रको प्रतिवद्धता
फिल्मी फण्डा । कलाकार संघको अध्यक्षमा रविन्द्र खड्का निर्वाचित भएका छन् । जेठ २५ गते शनिबार सम्पन्न संघको सत्रौँ साधारणसभाबाट खड्का नेतृत्वमा आएका हुन् । उनले चुनावी एजेण्डामा संघको भवन निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै, कलाकारलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
उनले कलाकारको वर्गिय हक हित र सुरक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता राख्ने, कलाकारको आर्थिक सम्बृद्धीका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, समाजिक सुरक्षाको घेरामा कलाकारलाई ल्याउने, वृद्ध र अशक्त कलाकारका लागि आर्थिक स्तरोन्नतीको कार्यक्रममा पहल गर्ने, पारिश्रमिक पुरा नपाएका कलाकारको हकका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, कलाकर्मीहरुको वरिष्ठताक्रम निर्धारण गर्ने, कलाकार संघलाई सातै प्रदेशमा पहुँच पुर्याउने, आफ्नो सिंगो प्यानल नै सार्वजनिक गर्दै रविन्द्रले कलाकार संघलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने समेत बताए । त्यस्तै संघलाई सबै कलाकारहरुको साझा बनाउने प्रयास गर्ने समेत उनले बताएका छन् ।
निर्वाचित भएपछि उनले अध्यक्षका प्रत्याशी सरिता लामिछानेको चुनावी एजेण्डाहरु पनि समेटेर अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले आफू कलाकारको पक्षमा काम गर्नका लागि नेतृत्वमा आएको र नेपाली कला क्षेत्रमा योगदान दिन प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । अध्यक्षमा पराजित लामिछानेले विजेता खड्कालाई बधाई दिएकी छिन् ।
‘चुनावमा हार्नु जीवन हार्नु होइन, मलाई मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज, सहकर्मीहरु तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई मनैबाट आभार, मेरा आदरणीय दाइ रवीन्द्र खड्का लगायत सम्पूर्णलाई बधाई,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन् । संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका खड्का नयाँ कार्यसमितिमा निर्वाचित भएकाले कलाकारको हक हितमा संघ केन्द्रीत हुने कलाकारहरुको अपेक्षा रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पैसाकै लागि हिन्दी फिल्मसँग साँठगाँठ
फिल्मी फण्डा । नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मलाई बुधबार प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको थियो । बोर्डको उक्त निर्णय विरुद्ध फिल्म वितरक कम्पनी ब्यांकटेस इन्टरटेन्मेन्टले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथी सुनुवाई गर्दै अदालतले गत सोमबार बोर्डको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फिल्म प्रदर्शनमा रोक नलगाउन भनेको हो । अदालतले स्वतन्त्र व्यवसायमाथि हस्तक्षेप नगर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई सचेत गराएको छ । अदालतले सोही दिननै निर्देशन माथी कार्वाही गर्न बोर्डलाई दबाब दिएको थियो ।
अदालतको आदेश पश्चात् सलमान खान अभिनित फिल्म ‘भारत’ गत बुधबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । भारत प्रदर्शनमा आएसँगै मल्टिप्लेक्स हलहरुले राम्रो दर्शक पाइरहेको फिल्म ‘जात्रै जात्रा’को शोज् कटौति गरे । न्यायलयको फैसला सबैले मान्नुपर्छ । तर, फिल्म वितरण र प्रदर्शन कसरि स्वतन्त्र व्यवसाय भयो ? स्वतन्त्र व्यवसायमा एकले गरेको व्यवसायले अर्को व्यत्तिकाले गरेको व्यवसायमा असर गर्नु हुँदैन । व्यवसाय भन्नाले आय आर्जन गर्नको लागि मानिसद्वारा गरिने आर्थिक क्रियाकलापलाई जनाउँछ ।
मानिसले पुँजी लगानी गरि जोखिम बहन गरे बापत त्यसबाट नाफा कमाउने उदेश्य लिएका हुन्छन् । यसरी व्यवसाय भनेको मुनाफा कमाउने उदेश्यले मानिसद्वारा गरिने आर्थिक क्रियाकलाप हो । स्वतन्त्र व्यवसायले अरुको व्यवसायमा असर पुर्याउन नपर्ने हो । तर, बुधबार विदेशी फिलम रिलिज हुँदा शुक्रबारबाट रिलिज हुने नपाली फिल्मलाई असर गर्छ कि गर्दैन ? शुक्रबार अघि नै विदेशी फिल्म रिलिज हुँदा शुक्रबार रिलिज हुने नेपाली फिल्मलाई असर गर्ने हुँदा चलचित्र विकास बोर्डले स्वदेशी तथा विदेशी सबै फिल्महरुलाई एकै दिन रिलिज गर्ने प्रणली अंगिकार गर्दै थियो ।
विदेशी फिल्म नेपाली फिल्म रिलिज अघि रिलिज हुँदा नेपाली फिल्मको व्यापारमा असर गर्छ भने फिल्म विदेशी फिल्म वितरण र रिलिजको व्यवसाय कसरि स्वतन्त्र व्यवसाय भयो ? न्यायलयको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था त छँदैछ । एक व्यवसायले सोही प्रकृतिको अर्को व्यवसायमा असर गर्छ भने त्यो स्वतन्त्र व्यवसाय रहँदैन । रजतपटका फिल्महरु वितरककहरुले जानाजान वलिउड वा हलिउड फिल्मसँग ‘क्ल्यास’मा पार्ने गरेका छन् । उनीहरु यतिसम्म गैर जिम्मेवार बनिदिन्छन कि वितरणमा पनि सिण्डिकेट खडा गरिदिन्छन् ।
वितरकहरुले विदेशी फिल्मको चेपमा घरेलु फिल्म पर्नुको एक मात्र कारण हो पैसा । फिल्म वितरण उनीहरुको व्यवशाय हो, व्यवशायमा नाफा हेरिन्छ । तर, नाफाको नाममा नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने बाटोमा अघि बढीरहेका छन् वितरक भन्दा फरक नपर्ला । विदेशी फिल्मसँग ‘क्ल्यास’मा पार्ने गर्दा कतिपय अवस्थामा नेपाली फिल्मको बुकिङ्ग समेत खुल्ला हुने गरेका छैन । एकै हप्तामा एकै वितरक कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी फिल्मको वितरण गर्ने गरेका छन् । वितरकको निहित स्वार्थमा नेपाली फिल्मको कारोबारमा असर गर्ने गर्दछ । यसले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई धराशायी बनाउनेमा दुईमत छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दीपकराजको झटारो–‘दर्शक कहाँबाट ल्याउने ?’
फिल्मी फण्डा । वितरक कम्पनी ब्यांकटेस इन्टरटेन्मेन्टले बुधबार नै रिलिज गर्न पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले ‘व्यवसायिक अधिकार हनन हुने गरी फिल्म रिलिज नरोक्न’ आदेश दियो । केही दिन अगाडि बलिउड फिल्म ‘कलंक’ लाई मल्टिप्लेक्सहरुले बुधबार रिलिज गर्न खोज्दा चलचित्र विकास बोर्डले हस्तक्षेप गरेर रोकेको थियो ।
शुक्रबार मात्रै नयाँ फिल्म रिलिज गर्नुपर्ने भन्दै उसले हलहरुलाई पत्र पठाएपछि हलवालाहरु तीन दिन पर्खिन वाध्य भएका थिए । त्यसैले भारत पनि बुधबार रिलिज हुन नसक्ने अवस्था थियो । तर, अदालतको स्टे अर्डर ल्याएर वितरक कम्पनीले भारतलाई बुधवार नै रिलिज गर्यो ।
उक्त निर्णयप्रति नेपाली फिल्मकर्मीहरु रुष्ट छन् । कलाकार दीपकराज गिरी पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न विषयमा आफ्नो मत व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । ‘भारत’ बुधबार नै नेपालमा प्रदर्शन गर्नका लागि वितरक अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा उनले आफ्नो मुख खोलेका छन् । हाल फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को छायांकनमा व्यस्त उनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर हल सञ्चालकप्रति झटारो हानेका छन् । ‘भारत’ नेपाल प्रदर्शनका लागि अदालतसम्म पुगेका मनोज राठी ‘छक्का पञ्जा’ सिरिजका वितरक समेत हुन् ।
उनले लेखेका छन्,– ‘अदालतको आदेशले, हलहरूको कृपाले, वितरकहरूको तिकडमले फिल्मले हल त कब्जा गर्ला, तर दर्शक कहाँबाट ल्याउने ?’ उनको स्टाटसबाट विदेशी फिल्म प्रदर्शनको लागि अदालतको आदेश, वितरक र हल सञ्चालकको मिलेमतो हुँदैमा दर्शक हलसम्म नपुग्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सलमानको भारतको लागि मल्टिप्लेक्सले फाले जात्रै जात्रा
फिल्मी फण्डा । जेठ ३ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म जात्रै जात्रा भोली शुक्रबारबाट चौँथो हप्तामा प्रदर्शन हुँदैछ । राजधानीका मल्टीप्लेक्स हलहरु लगभग हाउसफुल थिए । तीन हप्ताको कारोबारको रफ्तारमा बुधबार केही ब्रेक लाग्यो । बुधबार सलमान खान अभिनित बलिउड फिल्म ‘भारत’ प्रदर्शनमा आयो सोही कारण मल्टिप्लेक्स हलहरुले ‘जात्रै जात्रा’को शोज् कटौती गरे । तर दर्शक कटौती भएन । जति शो जहाँ जहाँ थियो सबैतिर हाउसफुल भयो । केही दर्शकहरु टिकट नपाएर फर्किए ।
नेपालको ठूलो मल्टीप्लेक्स चेन क्यूएफएक्सले राजधानीका आफ्नो पाँच स्टेशनमा प्रदर्शनको पहिलो दिन ‘जात्रै जात्रा’ लाई १९ शो दिएको थियो । दोस्रो हप्ता पनि फिल्मले यही आसपासमा शो पाएको थियो । तेस्रो हप्ता (मंगलवारसम्म) भने क्यूएफएक्सले फिल्मलाई थप २ शो बढाएर २१ पुर्याएको थियो । फिल्मले क्यूएफएक्समा बुधबार ७ शो मात्र दिएको हो कारण सलमानको फिल्म भारत थियो । सबै शो हाउसफुल भए । बिहीवार पनि फिल्मलाई ७ शो नै मात्र दिएको छ । चौँथो हप्तामा प्रवेश गर्ने दिन (शुक्रबार) फिल्मलाई चार शो दिइएको छ ।
राजधानीका अन्य मल्टीप्लेक्सहरुले तेस्रो हप्ता (मंगलवारसम्म) पनि फिल्मलाई राम्रो शो उपलब्ध गराएका थिए । धेरै नाफाको लोभमा मल्टीप्लेक्सहरुले सधैं नेपाली फिल्मलाई पाखा र विदेशी फिल्मलाई काखा गर्दै आइरहेका छन् । विदेशी फिल्मका कारण सधैं नेपाली फिल्म चेपुवामा पर्ने घटना नौलो होइन । अघिपछि नेपाली फिल्मको लागि दर्शक उपस्थित नभएको कारणले शो नदिने मल्टीप्लेक्सहरुले यस पटक राम्रो दर्शक पाइरहेको अवस्थामा पनि नेपाली फिल्मको शोज्मा कटौती गरेर अन्याय गरेका छन् । केही वितरक र मल्टिप्लेकसका केही चेनहरु हिन्दी फिल्मका माफिया हुन् भने प्रमाणित गरेका छन् । फिल्म प्रदर्शनको चौँथो हप्तामा जात्रै जात्राले मल्टिप्लेक्समा शतप्रतिशत अकुपेन्सि कायम गरेका छन् । तर, पुग्ने शो खै ?
जात्रै जात्राका निर्देशक प्रदीप भट्टराई यतिबेला फिल्म लिएर वैदेशिक यात्रामा रहेका छन् । उनले बुधबार फेसबुकमा लेखेका छन्,– ‘आफ्नो व्यापार व्यावसाय हो । आफू खुसी गर्न पाइएला । तर, व्यवसायिक धर्म भन्ने पनि त हुन्छ होला ? हामीले जति डिजर्भ गर्छौं त्यत्ति मागेका हौं । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो योगदानको बखान गरेर नथाक्नेहरुको मेरा भारत महान भनेको पनि देखियो । हल आफ्नो हुनेहरुले आफ्नो फिल्मको लागि मन खुशी शो राखे पनि दर्शकको मन खुसी नहुँदा कुन हालत भयो, देखेकै हो ।’
हल कब्जा गरेर मात्र दर्शक हलमा नआउने बताउँदै उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘मेरिट अनुसार पाउनु पर्ने शो नपाए पनि हामीले पाउनु पर्ने भन्दा धेरै माया दर्शकबाट पाएका छौं । अन्तिम सत्य दर्शक नै हुन् । आज टिकट नपाउनु हुने दर्शकप्रति क्षमा चाहन्छौं ।’ त्यस्तै विहीबार उनले फेसबुकमै लेखेका छन्,–‘केही कारणबश हाम्रो चलचित्रको शोहरु घटे पनि हजुर दर्शकहरुको माया भने बढेको बढ्यै छ ।
हिजो बुधबारको दिन पनि हाउसफुल नै भयो सबै शोहरु,हिजो सिनेमा हेर्ने सोच राखेर हल सम्म जानु भएका धेरैले टिकट नै पाइएन र हेर्न पाएनौ भन्नुभयो त्यस्को लागि सरि भन्छौ हामी । हेर्न नभ्याउनु भएकाहरुले आज निम्न समय अनुसार हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला । धन्यवाद । जय जात्रै जात्रा–जय नेपाली सिनेमा’ । यता दीपकराज गिरीले समर्थन गर्दै अप्रत्यक्ष रुपमा मल्टिप्लेक्स र वितरकलाई विदेशी फिल्मको माया बढेको बताईएको छ । यो त उदाहरण मात्र हो मल्टिप्लेक्सले नेपाली फिल्मलाई यसरी पेल्दै आईरहेको थियो र निरन्तर पनि छ । यस वारे अर्को लेख हामी केही समयमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।
यो पनि पढ्नुहोस् : कलाकार प्रति संघ उत्तरदायी हुनुपर्छ– सरिता लामिछाने
फिल्मी फण्डा । चलचित्र कलाकार संघको जेठ २५ गते हुने १७ औं साधारणसभाका लागि अध्यक्षको प्रत्याशी सरिता लामिछानेले आफ्नोे एजेण्डा सार्वजनिक गरेकी छन् । लामिछानेले आफ्नो प्राथमिकतामा नेपाल चलचित्र कलाकार संघलाई सम्पूर्ण कलाकारको छाता संगठन वनाउने प्रयास गर्ने, संघको परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने, कलाकार कल्याण कोषको वृद्धिगरी यसको कामलाई बृहत बनाउने, कलाकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति कार्य गर्ने, कलाकार संघको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने लगायतका कुराहरु रहेको बताइन् ।
मैले काम गर्ने वातावरण पाएको खण्डमा चलचित्र संघको आफ्नै भवन हुनेछ ।’ कलाकार संघको भवन बन्नैपर्ने उनले बताइन् । कलाकार प्रति संघ उत्तरदायी हुनुपर्ने । संघमा हिजोको पुस्ता पनि हुनुपर्छ र आजको पुस्ता अनि भोलीको पुस्ता पनि हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । संघमा राजनीति हावि हुँदै गइरहेको भनिन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्–‘म स्वतन्त्र कलाकार हुँ, राजनीति आस्था रहे पनि कलाकार संघमा राजनीतिक आस्था मिसाउन हुँदैन ।
संघमा गइसकेपछि विशुद्ध कलाकारको राजनीति हुनुपर्छ । कलाकारका हक हितका कुरा हुनुपर्छ, राजनीति प्रवेश गर्नु हुँदैन ।’ संघ प्रति कलाकारहरुको वितृष्णा रहेको र आफुले सो कुरा मेटाउन प्रयास गर्ने उनले बताइन् । उनले आफुलाई गैह्र कलाकारको आरोप लगाइएको बिषयमा उनले मन दुखेको बताइन् । ‘नेपाल चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएपछि मैले धेरै किसिमका धाकधम्की र वेइजती सहिरहनु परेको छ ।
अझ विभिन्न घटनाक्रमहरुले आफ्नो ज्यान नै असुरक्षित भएको महसुस गर्न थालेकी छु ।’ उनले आफूलाई गैह्र कलाकार भन्नेहरुलाई नै प्रश्न सोध्दै भनिन–‘तीन बर्ष महासचिव म के हैसियतले भएँ ? देश वा विदेशमा जाँदा मलाई तमाम नेपालीहरुले सरिता लामिछाने भनेर के आधारमा चिन्नुहुन्छ ? म ती मुद्धावालाहरुलाई सोध्न चाहन्छु ।’
यसअघि फिल्मी फण्डासँगको कुराकानीमा लामिछानेले भनिन् ‘२० बर्षे करियरमा गैह्र कलाकार प्रमाणित गर्न खोज्नु आफ्नो करियरकै सबैभन्दा ठुलो बेइज्जति र अपमान हो । यसले मलाई मानसिक तनाव भइरहेको छ ।’ आफुलाई लागेको आरोप र भावी योजना वारे जानकारी गराउन उनले मंगवार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिन् । उनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्धर, रेखा थापालगायत उपथित थिईन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : कलाकार संघको भवन मेरो प्रथामिकता – रविन्द्र खड्का
फिल्मी फण्डा । देशका कलाकारहरुको व्यावसायिक अधिकार र संरक्षणको लागि स्थापित भएको संस्था हो कलाकार संघ । समग्र राष्ट्रका फिल्म कलाकारहरूको व्यावसायिक संस्थालाई चित्रण गरी प्रति रचनात्मक कार्यको लागि संगठन अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै सम्पूर्ण कलाकारहरुको छाता संगठनको रुपमा स्थापना गरिए पनि संघ न छाता बन्न सकेको छ, न साझा बन्न सकेको छ ।
सन् १९९२ सालमा स्थापना भएको चलचित्र कलाकार संघमा नेतृत्वको फेरबदल भइरह्यो । नेतृत्वमा जो आए पनि कलाकार संघलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, कलाकार संघ कलाकारहरुको साझा बन्न सकेन । संघले जेठ २५ गते नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । अध्यक्ष पदको लागि सरिता लामिछाने र रविन्द्र खड्काले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
संघको आफ्नो भवन छैन । अध्यक्षका प्रत्याशी खड्का संघको भवन नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । ‘पहिले देखि नै मेरो प्राथमिकतामा आफ्नै भवन रहेको थियो । पछि अध्यक्षमा आएका अरु साथीहरुले पनि पहल गर्नुभएको थियो । स्व. रामकेशर बोगटीको पालामा केही रकम जम्मा भएको छ, अब सरकारसँग भवन निर्माणको लागि पहल गरि भवन बनाउने छौँ । ओत लाग्ने ठाँउ नै नभइकन हामीलाई अरु काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
उनले कलाकारको जीवनको उतरार्धमा आइपर्ने समस्याको समाधानको लागि पहल गर्ने बताए । उनले भने–‘लामो समय कलाकारितामा लागेर पनि उमेर ढल्कदै गए पछि औषधि उपचार गर्न दर्शकसँगै चन्दा मागेर उपचार गरेर बाँचेका छौँ । यो विडम्बना हो र यसको पनि अन्त्य गर्ने छौँ । तीस–चालिस बर्ष कलाकारितामा जीवन व्यतित गरेका कलाकारहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेर हुन्छ की, एउटा आश्रयस्थल निर्माण गरेर हुन्छ की कलाकारहरुको हक हितको लागि व्यवस्था गर्छु ।
संघका कलाकारको नभई राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरुको आकर्षण रहेको र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ नि भन्ने जिज्ञासामा खड्काले भने – ‘सर्वसम्मतबाट अघि बढौँ भनेर पहल गरेँ तर अन्य साथीहरुले मान्नुभएन । पदमा राजनीतिक भागबण्डा गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । राजनीतिक भागबण्डा गर्नुभन्दा आँफै अघि बढ्छु भनेर उम्मेद्वारी दिएँ । जुनसुकै पाटीको होस् हामी सबै एक भएर अघि बढ्नु पर्छ । राजनीतिक आस्था भएपनि संघलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्छ ।’
संघ सबैको साझा बन्न सकेन भन्ने फिल्मी फण्डाको जिज्ञासामा खड्काले भने ‘संघलाई सबै कलाकारहरुको साझा बनाउने प्रयास गर्नेछु । नयाँ र पुराना कलाकारहरु बीच परिचय नभएको अवस्था हुन सक्छ । कलाकारहरुबीच समन्वय गर्ने वातावरणको लागि पहल गर्नेछु ।’
यो पनि पढ्नुहोस् : निर्माता संघको आकस्मिक बैठक, निर्णय ध्यानाकर्षणमा सिमित
फिल्मी फण्डा । नेपालमा फिल्म रिलिजलाई लिएर बेला बेलामा विवादहरु हुने गरेका छन् । फिल्म रिलिजको लफडा कलिउडमा खासै नौलो होईन । तर, हाल फिल्म रिलिजको वारेमा भईरहेको बहस र मुद्धा नेपाली फिल्म क्षेत्रकै लागि एउटा भयानक दुर्घटना हो । चलचित्र संघ र निर्माता संघको आपसी सहकार्यमा फिल्म रिलिज हुदै आईरहेको थियो । सहकार्य तोडिएपछि सबै फिल्म शुक्रवारमात्र रिलिज गर्न पाउनुपर्ने माग निर्माता संघको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले पनि यसलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी फिल्म कलंक बुधवार रिलिज हुन दिएको थिएन । त्यतिबेला पनि विवादले तिब्र रुप लिएको थियो । विदेशी फिल्म भारत पनि बुधवार रिलिज हुन नदिने बोर्डले जनाएपछि फिल्मका वितरक मनोज राठी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गुहार माग्न पुगेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले चलचित्र विकास बोर्डलाई विदेशी फिल्म भारत बुधवार नै रिलिज गर्न नरोक्न निर्देशन गरेको छ ।
यस लगतै निर्माता संघ मंगलवार दिउँसो आकस्मिक बैठकमा बस्यो । बैठकबाट नेपाली फिल्मका निर्माताहरुको हकहितमा निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बैठकले सामान्य ध्यानाकर्षण भनेर विज्ञप्ती मात्रै जारी गर्यो । विदेशी फिल्म भारत आज बुधवारबाट रिलिज हुदैछ । विशेष ४ वटा चाडपर्व (दशैं, तिहार, तीज र नयाँ बर्ष) बाहेक अरुबेला शुक्रवार मात्र नेपाली फिल्म रिलिज हुन पाउने हुदाँ विदेशी फिल्म अगाडी आउँदा नेपाली फिल्म चेपुवामा पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्माता संघले तत्काल विकल्प खोज्न सकिने प्रावधानको निर्णय गर्न सकेन । चलचित्र संघसँग आन्दोलनको तयारी पनि गर्न सकेन । विदेशी फिल्म चल्यो ध्यानाकर्षण भयो भनेर चित्त बुझाउन मात्र सक्यो ।
हुन त अदालतको निर्णय विरुद्ध जान पनि मिल्दैन र जान सक्ने अवस्था पनि हुदैन । तर, त्यसपछिका समस्याहरुलाई सम्बोधन हुने गरि निर्माता संघ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । हतारमा बसेको निर्माता संघको बैठकले शुन्य अवस्थामा ध्यानाकर्षण बाहेक केही गर्न सकेन । यसले आफ्नो घरमा पराईले निर्देशन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको भान भएको छ । यस विषयमा जटिल भएर सबै फिल्मकर्मी र निर्माता संघले सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : फिल्म रिलिजमा मल्टिप्लेक्सको विवाद ?
फिल्मी फण्डा । कम रकममा विदेशी फिल्म फिक्समा ल्याएर नेपालमा जुनसुकै दिन रिलिज गर्न पाउनुपर्छ भने वितरकहरु र हलवालाहरुको तर्क छ । यता विदेशी फिल्म रिलिजको वारेमा स्पष्ट नीति कुनै पनि संस्थासँग छैन । प्रदर्शन र वितरणको विषयमा चलचित्र संघ र निर्माता संघको सम्झौता अनुसार अघि बढ्दै आईरहेको छ । तर, त्यो सम्झौता पत्रमा पनि विदेशी फिल्मको विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा छैन ।चलचित्र विकास बोर्डले पनि दुई संघको सहमतिमा रिलिज हुँदै आएकोले कुनै प्रावधान अपनाएको छैन । वितरक र हलवालाहरुले भने जस्तै विदेशी फिल्मको कुनै स्पष्ट धारण छैन । यस विषयमा बोर्डले दुबै पक्षलाई समेटेर आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गर्छ ।
जुनसुकै दिन विदेशी फिल्म रिलिज गर्दा नेपाली फिल्मलाई असर पर्ने भएपछि निर्माता संघले विदेशी फिल्म पनि स्वदेशी फिल्मजस्तै शुक्रवार मात्रै रिलिज गर्नुपर्छभन्दै आईरहेको छ । चलचित्र संघ भन्ने विदेशी फिल्म जुनसुकै दिन रिलिज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको छ ।
यो विवादलाई हेरेर निर्माता संघको औपचारिक पत्र बोर्डमा गएपछि बोर्डले विदेशी फिल्म कलंक बुधवार रिलिज हुन रोकेको हो । यो गलत प्रक्रिया भन्दै वितरक र हलवालाहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । तर, यो गलत प्रक्रिया हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै पनि आधार वितरक र हलवालाहरुसँग छैन ।
के छ सम्झौता पत्रमा ?
सम्झौता पत्रमा प्रदर्शन र वितरणको विषयमा राजधानीमा शुक्रवार मात्रै स्वदेशी फिल्म रिलिज गर्नुपर्ने भनिएको छ । विदेशी फिल्मको बारेमा केही पनि लेखिएको छैन । चलचित्र संघको तर्फबाट हरि प्रसाद द्धा (अध्यक्ष) र मुकुन्दकुमार ढुंगाना (महासचिव) यस्तै निर्माता संघको तर्फबाट युवराज लामा (अध्यक्ष) र अशोक शर्मा(महासचिव) को हस्ताक्षर रहने गरि २०६० साल श्रावण २३ गते १९ बुदेँ सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रमा वितरक, निर्माता र हलवालाको पक्षमा विभिन्न बुदाँहरुलाई समेटिएको छ । त्यसमा प्रदर्शनको विषयमा ९ नं बुदाँमा स्वदेशी फिल्म काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रवार मात्र रिलिज गर्ने भनिएको छ । सम्झौता पत्रमा विदेशी फिल्मको कुनै शब्द कहिँ पनि लेखिएको छैन । त्यसको अर्थ दुबै संघको सहमतिमा विदेशी फिल्मको प्रदर्शनमा सहमित गर्न सकिनेछ । तर, चलचित्र संघले निर्माता संघको कुरा नमानेपछि र नेपाली फिल्मलाई असर पर्ने भएपछि निर्माता संघले नेपाली फिल्मको पक्षमा बाटो खोज्नु कुनै नौलो कुरा होईन । त्यसमा पनि दुई संघबीच भएको सम्झौता जब एउटाले मान्न तयार हुदैन तब त्यो सम्झौता पत्र यसैपनि भंग भएको सरह हुन्छ । त्यसमा पनि २०७४ चैत्र ३१ गते चलचित्र संघ र निर्माता संघ बीच नयाँ सम्झौता भएको थियो । पुरानो सबैखाले सम्झौतालाई खारेज गर्दै नयाँ सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा पनि विदेशी फिल्मको बारेमा केही भनिएको छैन ।
सम्झौता कार्यान्वयन छैन
सम्झौता पत्रमा भनेजस्तै कुनै पनि बुदाँहरु चलचित्र संघले कार्यन्वयन गरेको पाँइदैन । निर्माता तथा वितरकलाई फिल्म रिलिज सकेको १ हप्ता भित्र हिसाब बुझाउने, एकै दिन एकै पर्दामा विदेशी र स्वेदेशी फिल्म चलाउन नपाईने, हलहरुले अनुमति लिएको भन्दा बढि शो चलाउन नपाउने, गर्न चाहेको खण्डमा दैनिक थप अनुमति लिनुपर्ने जस्ता नियमहरु चलचित्र संघले कार्यन्वयन गरेको छैन । यस्तै अन्य थुप्रै गतिविधीहरु सम्झौता विपरित हुँदै आईरहेको छ ।
यसअघि पनि सम्झौता पत्रलाई उलंघन गर्न खोज्दा चलचित्र विकास बोर्डले नै हलवालाहरुलाई पत्र काटेर शो रद्ध गरिएको थियो । पूर्व अध्यक्ष राज कुमार राईको पालामा २०७३ साल भाद्र २ गते बिहीवार रिलिज गर्ने भनिएको अर्जुन कुमारको फिल्म चपलि हाईट रोक्न बोर्डले हलहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।
अहिले त सम्झौता मै नभएको र नेपाली फिल्मको पक्षमा रहेको कुरालाई बोर्डले पत्र काट्दा चलचित्र संघ तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । तथापि दुबै संघ बीच पनि सहमति खोज्न चाँही आवश्यक छ । तर, दुबै संघबीच अविश्वास भएको खण्डमा बोर्डले नै फिल्म क्षेत्रका समस्या सुल्झाउने अधिकार बोर्डमा निहित छ । यस कारण पनि विदेशी फिल्म जुनसुकै दिनमा आउँदा नेपाली फिल्मलाई असर पुग्ने भएपछि त्यसको सहजताको लागि बोर्डले कदम चाल्न सक्ने प्रावधान छ । सोही अनुरुप विदेशी फिल्म पनि नेपाली फिल्मलाई असर नपर्ने गरि शुक्रवार मात्र रिलिज गर्न गराउन बोर्डले निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार बोर्डसँग छ ।
निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले पनि सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने भएपछि त्यसको औचित्य नभएको बताए । चलचित्र संघसँग यो पहिलेदखिको अवस्था हो । त्यसलै विदेशी फिल्मलाई पनि शुक्रवार मात्रै रिलिज गरौं भन्ने हाम्रो माग बोर्ड समक्ष हो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक पक्ष हामी हौं । हामी सबै फिल्म शुक्रवार रिलिज हुनुपर्छ भन्नेमै छौं । बोर्डसँग त्यहि माग छ । यसको लागि हामी निरन्तर लागिरहन्छौं ।